Wasiir Goodax''Xildhibaanada qaar waxay muujiyeen welwel ka haysta soo laabashadooda'' - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Wasiir Goodax”Xildhibaanada qaar waxay muujiyeen welwel ka haysta soo laabashadooda”
Wasiir Goodax”Xildhibaanada qaar waxay muujiyeen welwel ka haysta soo laabashadooda”
Wasiirka Wasaaradda waxbarashada Xukuumada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay wel wel ka qabaan sidii ay dib uga soo laaban lahaayeen Kursiga.
Waxaa uu sheegay Wasiir Goodax in doorashadda qaabka ay u soo diyaariyeen Guddiga baarlamaanka uu yahay Mid wanaagsan oo Mudan in taageero loo muujiyo.
Wasiir Goodax ayaa ugu baaqay Xildhibaanada Golaha Shacabka in Sharciga aysan u dhibaateyn in uu ka hor imanaayo soo laabashooda,islamarkaana ay taageero u muujiyaan.
Xildhibaan Goodax oo baarlamaanka Khudbad ka horjeedinaayay ayaa sidoo kale tilmaamay in doorasho qof iyo Cod ah ay dalka ka dhici karto,islamarkaana Xildhibaanada laga soo dooran karo degaanada Ammaanka ah.
Waxaa wali Khilaaf xooggan uu ka taagan nooca doorasho ee ka dhaceysa Soomaaliya, waxaana Sharcigii doorashooyinka ay soo diyaariyeen Guddiga baarlamaanka uu wali horyaalla Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Previous articleKhasaare ka dhashay dab ka kacay Guri ku yaalla Hargeysa
Next articleFarmaajo oo kulan la yeeshay guddiga Wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland